မဆုမွန်: ဆုမွန်အတွက် ဆလိမ် ဆိုတာ
ဆုမွန်အတွက် ဆလိမ် ဆိုတာ
အန်တီခင်မင်းဇော် တက်ပ်တဲ့ ပို့စ်လေး ပါ။
1. What is your name : Suu Mon
2. A four Letter Word : Soon
3. A boy's Name : Soe Tu
4. A girl's Name : Sone Tin Par
5. An occupation : Supporter
6. A color : Sexy
7. Something you'll wear : Suit
8. A food : Spicy
9. Something found in the bathroom : Soap
10. A place : South Korea
11. A reason for being late : So busy
12. Something you'd shout : SHIT!!! Shut up!!!
13. A movie title : Sword
14. Something you drink : Spy
15. A musical group : Super Sexy Small
17. A street name : San Chang
18. A type of car: Sit Kyan Bus
19. The title ofasong : San Francisco
20. A verb : : Surprise
ပြောချင်တဲ့စကားလေး လေးလုံးက ဆုံနိုင်ခွင့်လေး
အရောင်ထဲမှာတော့ ဆည်းဆာတောက်ချိန်ကို အကြိုက်ဆုံး
အော်ချင်နေတာကတော့ ဆူဆူညံညံ တွေ အခုတိတ်
ဘာသောက်ချင်လဲဆိုတော့ ဆော်ဒါရောထားတဲ့ သုရာ
တီးဝိုင်းနံမည်က . ဆလိမ်နဲ့စတာ စဉ်းစားတုန်း ဆူပါစတားပါတဲ့ရှင် ဦးလေးဦးနိုင်ပေးသွားတာပါ ကျေးဇူး
ကားက ဆလွန်းကားနဲ့ပဲ ထွက်ခဲ့မယ်
သီချင်းလေးထဲမှာ ဆု ကို အကြိုက်ဆုံး
ကြိယာထဲမှာတော့ ဆွဲကုတ်ပစ်ချင်တယ် ကြည့်မရတဲ့သူတွေကို
စဉ်းစားမိသလောက်လေး ရေးကြည့်တာပါပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး ခေါင်းနည်းနည်းတော့ စားသွားတယ်။ ပျော်ဖို့တော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်ရှင်။ ဆက်တက်ပ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကိုယုယ။ ကိုဗညားရှိန် အိမ်မက်ခြေရာ။နှင်းဆီချစ်တဲ့ ညီမလေး ညီမလေးယဉ်တကိုယ်မယ။် မောင်ငယ်လေး ပြည့်စုံ နဲ့ ချစ်တဲ့ ညီမငယ်ပြည့်စုံ ကို တက်ပ်ခ်ပါတယ်။ အားမှရေးပေးပါနော်။
Posted by မဆုမွန် at Sunday, October 11, 2009
ချစ်လို့တက်ခ်တာဘဲ ရေးပေးရမှာပေါ့နော့ မမ။
သူငယ်တန်းတုန်းက ကကြီးကလေးငယ်ချစ်စဖွယ်ဆိုတာသင်တုန်းက။ ဆလိမ်လည်းရောက်ရော ဆလိမ်ဆရာမ ရိုသေကြဆိုတာကို ဆလိမ်ဆရာမ ဖင်လှန်ပြလို့ အော်လို့ဗျောတီးခံရသေးတယ်။
ဆလိမ် (မ)ဆုမွန်ပျော်စေလို ပါတယ်နော်။
No.9plz check again .. sry to say that tho.
မြန်မာလို ဆလိမ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံး S အတွက် သုံးစရာ စကားလုံးတွေ အတော်များတာပဲနော့်။ ဒါပေမယ့် မဆုမွန် ရေးထားတဲ့ - A verb ကို စဉ်းစားပြီး ပြန်ပြောင်းဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
(ခင်လို့ ဆ တာ အဲ စတာနော်)
ဆူမိုနပန်းသမားဆိုလို့ လန့်သွားတယ် ဘယ်တုန်းက ငါ့အမတစ်ယောက် ဆူမိုကို ၀ါသနာပါသွားပါလိမ့်လို့...
ကျနော်လည်း စဉ်းစားတုန်းပဲ.... :P :P :P
အဆိပ်ခွက်တဂ်ထားသေးတယ် အခုဆို နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့
ဆုမွန်ရေး... Tag သွားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Tag အဖြစ်အမြဲသတိရနေမှာပါ။ ဖြူတုတ် အရမ်း excited ဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ပဲ ရေးလိုက်မယ်။ ဒါနဲ့ ဆုမွန်ရေ... ဖြူတုတ်က ဆုမွန်ထက်ကြီးဖို့များတယ်။ ၂၇ ရှိသွားပြီ။ ညီမလေးလို့ခေါ်ခံရတာ၊ ပိုငယ်တယ်လို့ထင်တာ သိပ်ကြိုက်ပေမဲ့ ကျောမလုံလို့ ဆုမွန်ရေ့။ တမျိုးတော့ မထင်ပါနဲ့နော်။ အမြဲအားပေးနေမဲ့...
အမယ်လေး အမယ်လေး ဆူမိုမမတို့ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ အဟိ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်က ဆလိမ်နဲ့ ရေးရမှာ လား အ နဲ့ရေးရမှာလားဗျာ တဂ်ထားတာတော့ကျေးဇူးပါနော် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အတဂ်ခံရတယ်ဆိုတော့ အဟဲ ပျော်တယ်ပေါ့နော် အဟီးရေးပြီးလို့မကောင်းရင်မပြောရဘူးနော် နည်းနည်းရှုပ်နေလို့ခုမှလာမိတာ ခွင့်လွှတ်ဗျ အဲ့ဒီ ဆ လား အ လားဆိုတာလေး သိပြီးရင်ရေးတော့မယ်း))